सुन्दर नर्स करुणा यस्तो बिरामी, भन्छीन “जिन्दगीको कुनै टुङ्गो हुदैन”-हेर्नुहोस (भिडियो सहित ) – Ap Nepal
सुन्दर नर्स करुणा यस्तो बिरामी, भन्छीन “जिन्दगीको कुनै टुङ्गो हुदैन”-हेर्नुहोस (भिडियो सहित )
September 20, 2021 244
सामाजिक संजाल टिकटकमा नेपाली आधुनिक गीतहरुमा टिकटक बनाइ चर्चामा रहेकि एक नर्स हुन करुणा दाहाल । आफैँ पनि मीठो स्वर भएकी उनी पेशाले भने नर्स हुन । झापा जिल्लाको तोपगाछी घर भएकी करुणाका टिकटक धेरैले मनपराएका छन । नेपाली गीत त्यसमा पनि आफुलाई धेरै मन पर्ने उनी बताउँछिन । आफू धेरै जसो त्यसैमा टिकटक बनाउन मन पर्ने उनी बताउँछिन ।
पछिल्लो समय पथ्थरी को रोगबाट पिडित उनी अहिले अप्रेसन गरि औसधि सेवन गरि आराम गरिरहेको उनले बताइन । डाक्टरले आराम गर्न सल्लाह दिए पछि उनी अहिले आफ्नो डिउटी छोडी घरमै बसिरहेकी छिन ।
आफू टिकटक बनाउन धेरै मन पराउने भएकोले घर बसेको बेला टिकटक बनाउने समय धेरै पाएको उनी बताउँछिन । मान्छेको जिन्दगी कुन बेला के हुनेको कसैलाई थाहा नहुने भन्दै बाँचुनजेल जसरी मन लाग्छ खुशी रहनु पर्ने उनको भनाई छ ।
करुणा भन्छिन ` जिन्दगीको कुनै टुङ्गो हुदैन ।´ त्यसैले सबैसगँ हासी खुशी रहनु नै जिन्दगी हो भन्ने आफुलाई लाग्ने गरेको उनी बताउँछिन । मीठो स्वर भएकी उनी आफुले गीत पनि रेकर्ड गरेको बताएकी छिन । आफ्नो युट्युव च्यानलमा एउटा अफिसियल गीत रेकर्ड गरि राखेको उनले बताइन् । अहिले सम्म आफ्नो ३ वटा गीत रेकर्ड भएको उनी बताउँछिन् । भर्खरै रेकर्ड भएको गीत अब यहि दशैँ अघि सार्वजनिक हुने उनले बताइन् ।
आफुलाई गीत संगीतमा पनि धेरै रुचि भएको उनले बताइन । पेशाले नर्स भएकोले गीत संगीतमा भने जस्तो समय दिन नपाएको उनी बताउँछिन । आफुलाई धेरै नेपालका गीत संगीतमा काम गरेका कलाकारहरुसगँ काम गर्न मन लागेको उनी बताउँछिन् । तर आफू त्यि स्तरसम्म पुगि नसकेको उनको भनाई छ । त्यो स्तरको गीत गाउन सक्छु होला र ? भन्ने आफुलाई लाग्ने गरेको उनी सुनाउँछिन् ।
आफुलाई निशान भट्टराईसगँ गीत गाउन मन भएको पनि उनले बताईन । तर त्यो अवसर होला कि नहोला त्यो थाहा नभएको तर यदि आफूलाई कोहिसफँ गीत गाउने मन छ भनेर कसैले सोध्दा आफुले लिने नाम निशान भट्टराई भएको उनी बताउँछिन । तर यदि त्यो मौका कतैबाट जुरेमा आफुले निशानसगँ गाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने आफुलाई डर पनि लाग्ने गरेको उनी बताउँछिन । साथिहरुले मोटु भएर राखिदिएको नाम आफुलाई प्यारो लाग्ने उनको भनाई छ ।
Prevकठोर मन भकि आमा भन्छिन् “मैले पाइदिने काम हो,पाइदिएँ,जसले जे सुकै भनोस् मलाई छोराहरूको एक रति माया लाग्दैन”-हेर्नुहोस्(भिडियो हेर्नुहोस्)
NextNIFRA ले गर्यो लाभांश घोषणा सुचना सहित
चाँदीको बालाको लोभमा बालकको हत्या..
अन्ततः सबैलाई दिए माफी, तिमीहरूको भविष्य बिग्रन्छ यस्तो नगर्नु भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले सबैलाई माफि दिए (भिडियो सहित)
५ महिना अघिमात्र शाहुको ऋण तिर्न भारत पुगेका राजको भोक प्यासले त’ड्पिएरै मृ’ त्यु
घरमै अनुहार चम्काउन चाहानुहुन्छ ? यी घरेलु तरिका अपनाउनुहोस्
डिभोर्स पछि पहि,लोपटक मिडि,यामा आएकी प्रतिभाले रुँदै बखतलाई यति सम्म भनिन्, (भिडियो हेर्नुस्) (5483)
महान श्रीमान बिनोद र अनिता खड्काको अभिनयमा पहिलो भिडियोले सबैलाई रु,हायो (भिडियो सहित) (3480)
मलेशियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याएका क्याप्टेन विजय लामाले पोखे यस्तो दु:ख..भावुक हुदै यसो भन्छन् (2815)
रहिनन् भारती , बलिउड अभिनेता सोनुले भाबुक हुदै लेखे यस्तो स्टाटस्.. मेरो मुटुमा तिम्रा लागी खास ठाउँ रहनेछ.. (भिडियो) (2705)
बिना लाइसेन्स गाडी चलाउँदा आउनसक्छ यस्तो विप, त्ति ! जुन देवकुमारलाई आइपर्यो, उनले यस्तो होला भन्ने कहिले सोचेका थिएनन्.. … (2506)
निशा घिमिरेको नेपाली गीतमा मात्र हैन भोजपुरी गीतमा समेत दमदार अभिनय-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (2503)
पोखरामा कार्यक्रम गण्डकी छ ’ड्केका पत्रकार सहित १० जनाको मृ त्यु- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित ) (2500)
बिनाताको बुवा साउदीबाट आए भिडियो लाइभ ,छोडेर गएकी श्रीमतिलाई दिए यस्तो संदेश (हेर्नुस् भिडियो सहित) (2358)
थीर कोइरालाले अन्जु पन्तसँग लिएको त्यो अन्त, रवार्ता; जतिबेला उनी मनोजकी श्रीमती थिइन अनि थीरसंग अन,जान (हेर्नुस भिडियो सहित) (2349)
प्यान्टको गोजिमै पढ्कियो ओप्पो मोवाइल , दुवै खुट्टामा गम्भिर चोट , घटनाबारे यस्तो भन्छन यी युवा (भिडियो सहित) (2320)
टिक-टक युजरहरूलाई खु:शिको खबरः अब टिकटकमा यस्तो फिचर …
यी हुन् सीआईबीले काठमाडौंमा नियन्त्रण गरेका अफगान दम्पती..
विराटनगरमा घट्यो यस्तो घटना , सीसी टिभीमा देखियो यस्तो (भिडियो सहित)
भाइरल जोडिको यस्तो बन्यो घर, अमेरिकाबाट घर हेर्न आए , कोठाहरू बने यस्तो (हेर्नुस् भिडियो सहित )
पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाहको रो, मान्टिक डान्स मुड-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )